Soomaaliya siyaasad noocee ah ayay u baahan tahay? - BBC News Somali
30 Oktoobar 2017
Image caption Madaxweyne Farmaajo iyo Ra'isulwasaare Kheyre
Machadka cilmi-baarista siyaasadda ee Heritage ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho ayaa soo saaray daraasad cusub oo uu ka sameeyay marxaladaha siyaasadeed iyo kuwa amni ee Soomaaliya ka jira.
Daraasadda oo ka koobnayd 6 bog, xigatayna ilo kala duwan ayaa lagu sheegay in dowladda federaalka ee uu madaxweyne ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay farogalin ku samaysay dowlad goboleedyada, islamarkaasna ay xilkii ka qaaday madaxweynihii Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cosoble, iskuna dayday in ay xilka ka qaado madaxweyne Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf.
Daraasadda ayaa lagu sheegay in madaxda cusub ee Soomaalida ee markasta la doorto ay si khaldan u turjuntaan taageerada shacabka iyo tan xildhibaanada, marka ay xilka qabtaan ay isku dayaan in ay dalka u hoggaamiyaan hadba sida ay doonaan, taasi oo dhalisa khilaaf iyo isfaham waa.
Heritage waxa ay sheegtay in dowladda Farmaajo ay ku dhacday god ay horay ugu dhaceen dowladihii ka horeeyay, kaas oo ah in banaanka la dhigay kooxaha siyaasadeed ee dalka ka jira, taasna ay keentay in dowladda la mucaaraddo, loona fiirsado gefafka ay gasho.
Shirka Kismaayo maxaa ka soo bixi kara?
Sideedii bilood ee ay dowladda jirtay waxa ay daraasadda lagu sheegay "in ay gefaf badan gashay sida dadkii lagu laayay Bariire, dhiibistii Qalbi Dhagax, wasaaradda ganacsiga oo kala dirtay Rugta Ganacsiga, inkasta oo ay markii dambe laga laabtay, iyo kuwa kale, waxayna horseedeen in dadkii dowladda kasoo horjeeday gefafkaas dowladda ku weeraraan."
Waxaa warbixinta lagu sheegay in markii uu soo baxay khilaafkii dalalka Khaliijka ay xiisada siyaasadeed cirka isku shareertay, waxayna dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada isku qabsadeen qodobada 54aad iyo 53aad ee dastuurka, "halkaasna waxaa kasoo baxay dhibaatada uu leeyahay dastuurka qabyada ah xilli aysan jirin maxkamad dastuuri ah oo fasiraad sax ah samaysa."
Image caption Qaar ka mid ah madaxweynayaasha dowlad goboleedyada oo ka qeybgalaya shir uu ku casuumay madaxweyne Farmaajo
Dhismihii golaha dowlad goboleedyada ee Kismaayo ayay daraasadu ku sheegtay "golahan wuxuu u muuqdaa mid qabanaya shaqooyin la mid ah kuwii Aqalka Sare, oo sida ku cad qodobka 71-aad ee dastuurka, ah mid danaha maamul goboleedyadu ku metelaya heerka federaalka."
"Siyaasiyiin ay ka midyihiin labadii madaxweyne ee Farmaajo ka horeeyay Sheekh Sharif iyo Xasan Sheekh iyo Ra'isulwasaarihii hore Cumar Cabdirishiid ayaa ku kulmay dalka Isutagga Imaaraadka Carabta waxayna dhisayaan isbahaysi siyaasadeed oo ay kaga soo horjeedaa dowladda Farmaajo," sida lagu xusay qoraalka ka soo baxay machadka siyaasadda ee Heritage.
Dhanka amniga, daraasadda waxay sheegtay in is casilaaddii taliyihii xoogga dalka in ay tahay mid wiiqaysa xasiloonida laamaha amniga.
Ciidammadda AMISOM ayay daraasadda sheegtay in ay aad uga caroodeen warqad kasoo baxday wasiirka arrimaha dibada oo la faafiyay, taas oo lagu eedeeyay in AMISOM ay wax ka qaban waysay amniga Soomaaliya.
Ugu dambeytii daraasadda Heritage ayaa soo jeedisay talooyin, waxaana ka mid ah in madaxweyne Farmaajo uu weerarkii 14-kii Oktoobar u isticmaalo fursad, in dastuurka dib u eegis lagu sameeyo, in madaxda dowlad goboleedyada aaney ka shaqeyn 'hagardaameynta madaxtinimada Farmaajo'.